'त्यो एक रुपियाँ सयमा बढी भयो' NewsButwaltoday
अर्जुन ज्ञवाली बुटवल
स्थानीय निर्वाचन २०७९ को चहलपहल छ । बैशाख ३० गते २०७९ का दिन मुलुकका ७ सय ५३ पालिकामा चुनाव हुने हो । चुनावी तयारीका पूर्व सन्ध्याहरुलाई हेर्दा एमालेको जीत निश्चित हुदै गएको छ । नेपालमा गाँउमा विकासको थलानी गर्ने पाटी भनेको नेकपा एमाले हो । एमालेले नै आफनो गाँऊ आफै बनाऊँ भन्ने कार्यक्रम ल्याएर सिधैं गाँउमा बजेट पठाउन थालेको हो । गाँउलाई महत्व नदिने पार्टी तथा बुद्धिजीवीहरुले एमालेले गाउँमा कनिका छर्न लाग्यो भनेर टिप्पणी पनि गरेका हुन् । यसबाट माखो मर्दैन पनि भनेका हुन ।
आफनो गाँउ आफै बनाऊ कार्यक्रम अन्र्तगत शुरुमा जे जति भए पनि सोझै गाँउमा पुगेको बजेटले राम्रो प्रभाव पा¥यो । गाउँलेले आफ्नै निर्णयमा कुला कुलेसा , पुल पुलेसा बनाउन पाए । विद्यालयमा शैचालय बनाए । जनता र सरकार मिलेर कतिपय ठाँउमा स्वास्थ्थ चौकी बने । स्वास्थ्य चौकीहरुको सहजीकरणमा सहजै बच्चा जन्माउन पाउँदा सुत्केरी आमाहरुले आफनो सरकार हुनुको न्यानो अनुभव गरे । मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको एमालेको सरकारले आफनो गाँउ आफै बनाऊँ कार्यक्रम मार्फत मात्रात्मक रुपमा थोरै भए पनि र आकारगत रुपमा सानै भए पनि देशै भरि विकास छर्ने काम शुरु गरेको हो । अहिले हामी जे जस्तो बिकास देख्छौं, त्यति खेरै छरेर उम्रिएको भएको विकास हो । स्कुलमा, कलेजमा, खेतमा, बारीमा, सडकमा , उद्योगमा , व्यापारमा जे जस्तो विकास देखिएको छ, त्यही विऊ उम्रिएको हो । स्वभावैले हुने विकास भन्दा यतिकन पनि जति बढी जे जति विकास देखिएको छ , त्यो विकास नितान्त रुपमा त्यही बिऊ उम्रेर भएको विकास हो । यहाँ यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुको अर्थ — नेपालको विकासमा यथास्थितिमा छलाङ् हान्ने शूुत्रधार नेकपा एमाले नै हो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भएको बखत मनमोहन बाले नेपालमा बृद्ध बा आमालाई राज्यकोषबाट महिनामा एक सय रुपियाँ भत्ता दिन शुरु गरेका हुन् । त्यति बेला एक रुपियाँ कप चिया थियो । धेरै दिन सकिएन , दिनमा एक कप चिया सम्म बृद्ध बा आमालाई खुवाऊँ भनेर यो काम थालिएको कुरा उहाँ आफैले भन्नु भएको हो । त्यो एक रुपियाँ आजसम्म आइपूग्दा सयमा बढी भएको छ । उस्तै परे दुखजिलो गरी बाआमाले छाकै टार्न सक्ने अवस्था बनेको छ । चिया खाने रुपियाँ बढेर भातै खान पुग्ने भएसी बा आमाले एमालेलाई आशीर्वाद नदिने कुरै भएन । आशीर्वाद दिनु भएको छ । यसै आशीर्वाद पनि एमालेले चुनाव जित्छ ।
एमालेले स्थानीय पालिकाहरु चुनाव जित्ने थुपै आधारहरु छन् । एमालेबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरुले तुलनात्मक रुपमा राम्रा कामहरु गरेका छन् । आफुले बाचा गरेका काम करिव– करिव पुरा गरेका छन् । पालिकाहरु अधिकारसम्पन्न भएका हुनाले जनताका दैनिक जीवनसँग गासिएका जग्गा–जमिन, तिरोभरो , कुलोपानी, बिजुली, बाटोघाटो, लिखत्–प्रमाण, नामसारी,नागरिकता, तत्काल आवश्यक निर्णय,आवश्यक सिफारिस जस्ता काम एमालेबाट छानिएका जनप्रतिनिधिहरुले सेवक बनेर गरे । त्यसो भएर जनतासँग भोट माग्न जान तिनलाई कत्ति संकोच छैन । हामीले बाचा गरेका यो यो काम सम्पन्न ग¥यौं, यो यो काम बाँकी छ , यो पुरा गछौं, यी यी नयाँ काम गछौँ भनेर जनतासँग बिन्ती बिछायाउन सहजै सक्छन् । जनता बैगुनी हुँदैन, गुन तिर्छ । तसर्थ एमालेले चुनाव जित्छ ।
नौ महिने एकल सरकार पछि एमाले कहिले पक्ष र कहिले बिपक्ष हुदै अगाडि बढ्यो । आफु पक्षमा रहदा सके सम्म गाँउमै बजेट बढी पठाउने प्रयन्न ग¥यो । विपक्षमा रहँदा पनि जनताको सुख दुखको साथी बनेर रह्यो । नेपाल गाँउ नै गाँउको देश हो । गाँउ बने मात्र देश बन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । यसै अभिप्रायमा आफनो गाँउ आफै बनाऊँ भन्ने कार्यक्रम एमालेले ल्याएको हो । यसमा उ अडिग छ । गाँउ बनाऊँ भन्ने कुरा गर्दा कृषिक्रान्ति को कुरा आउँछ । कृषिक्रान्ति भनेको कृषिको उद्योगीकरण हो । जब सरकारको बजेट गाँउमा जान्छ र कृषिमा प्रयोग हुन्छ,देशको बिकास हुन्छ । यस कुरामा एमाले विश्वस्त छ ।
नेपालमा २००७ साल पछिको अनरवत सर्घष र त्यसबाट अभिव्यतm जनमत अनुसार २०७२ सालमा सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको हो । त्यसअनुसार२०७४ असार महिनामा स्थानीय स्तरको निर्वाचन भयो । त्यसमा एमालेलाई दुई तिहाई भन्दा माथिको जनमत प्राप्त भयो । त्यसपछि २०७५मा संघीय निर्वाचन भयो । त्यसमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर एउटै पार्टी बनाई चुनाव लडे । दुबै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा ) बन्यो । त्यसको पक्षमा ठूलो जनसमर्थन बन्यो । जनताले नेकपालाई झण्डै दुई तिहाई मत दिए । अध्यक्ष के.पी. ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यसबाट नेपाली जनता अब नेपालमा केही हुन्छ भन्ने विश्वासमा पुगे ।
के.पी. ओलीको सरकारले जन अपेक्षा अनुसार राम्रो कार्यक्रम ल्यायो । सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासमा सटीक र सार्थक कार्यक्रम थियो त्यो । बृद्ध भत्ताको निरन्तरता र स्वास्थ्थ बीमा सामाजिक न्यायका उल्लेखनीय उदाहरण हुन् । ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्थ विमा अत्यन्त प्रशंसनीय रह्यो । जेष्ठ नागरिकले अब मेरो ओखती उपचार सरकारले गर्छ भन्ने अनुभव गरे । आर्थिक कार्यक्रम यथास्थितिका विरुद्ध आक्रामक थियो । यसले गर्दा मुलुकमा केही हुने आशा पलायो । ३ वर्ष सम्म सरकारले जमेर काम ग¥यो ।
सँगसँगै पार्टी भित्र पाप पलाइरहेको रहेछ । झाँगिएर आउन थाल्यो । केही स्वार्थी पदलोलुप छद्मभेषी खलनायकहरुका कारण आखिरमा पार्टी चोइटियो । केही माओबादी झुण्ड बनेर निस्किए । कही नयाँ पुच्छ्र हालेर नयाँ नाउँमा निस्के । तव पनि के.पी. ओलीको नेतृत्वमा मूल पार्टी सुरक्षित रह्यो । लोभी पापीहरुले त्यसलाई हल्लाउन सकेनन् । के.पी. ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले अहिले पनि कम्युनिष्ट मूल प्रवाह बनेर रहेको छ । यही मुल प्रवाह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को बिरासत हो ।
नेकपा एमाले नै नेपालको विकास गर्ने र नेपाली रष्ट्रियताको जर्गेना गर्ने पार्टी हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन् । यो जनविश्वास मुलुकमा रहेको छ । एमालेलाई यसको दायित्वबोध पनि छ । आफनो दायित्व पुरा गर्न एमाले सक्षमपनि छ । त्यसै भएर विकास र रष्ट्रियताका लागि नेपाली जनताले एमालेलाई भोट हाल्छन् । त्यसै भएर एमालेले चुनाव जित्छ ।
जनताले आफ्नो पालिकामा भए गरेका काम आफनै नाङ्गा आँखाले देखेका छन् । उनलाई थाहा छ — बितेका ५ वर्षमा तिनले आफना आँखा अगाडि बाटो बनेको देखेका छन्, स्वाथ्य चौकी बनिरहेको हेरेका छन् । विद्यार्थी बोक्न गाडी गुडेका छन् । पानी आएको छ । बिजुली बलेको छ । जहाँ छैन बनिरहेको छ । वडा कार्यालयमा, पालिका कार्यालयमा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत आफनो काम सजिलै भैईरहेको छ । यस्तो अनुभव भइरहेको छ— भोट खेर गएन । आफुले चुनेका मान्छे रहेको प्रदेश र संघीय सरकारले बनाएका पुर्वाधार विकासका निर्माणहरु पनि जनताले देखेका छन् । चार लेन, छ लेनका सडक छन् । एअरपोर्ट बनेको छ । नदीनाला थुनेर साना ठुला थुपै विद्युत्–गृह बनेका छन् । आफ्नो मूलुक बिजुली बेच्ने हैसियतमा पुगेको छ । नयाँ–नयाँ उद्योग खुलेका छन् । नयाँ –नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनिरहेका छन् । ठाँउ– ठाँउमा शैक्षिक क्षेत्र छन् । अब आफ्ना नानी बावुलाई पढ्न त्यस्तै विशिष्ट विषयमा बाहेक विदेश धाउन पर्देन । रोजगारीका अवसर तयार भइरहेका छन् । सुस्त सुस्त अब नेपाली युवाहरुलाई रोजगारीका लागि विदेश धाउन नपर्ने वातावरण बनिरहेको छ । तसर्थ यसको निरन्तरताका नेपाली जनता नेकपा एमालेलाई जिताउन आतुर छन् ।
देशको सुन्दर भविष्यका लागि यो निर्वाचन एकदमै महत्वपूर्ण छ । तत्काल भोलि हुने संघीय निर्वाचनका लागि महत्पूर्ण छ । नेपालको सुन्दर भविष्यको भारवहन नेकपा एमालेले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता सचेत छन् । तसर्थ सचेत नेपाली जनता नेकपा एमोललाई भोट दिन्छन् । त्यसबाट यस निर्वाचनमा र आउने संघीय निर्वाचनमा एमालेको जित निश्चित छ ।
अपडेट : 2022-05-05 08:54:25